Olunye ukhetho olwahlukileyo kwiCCleaner Ubuntu bakho | Ubunlog
Ukuba ungumsebenzisi weWindows, ngokungathandabuzekiyo uyazi CCleaner, isixhobo esidumileyo esenza ukucoca inkqubo yakho kube lulaUnqakrazo olunye nje, luya kuthatha unonophelo lokususa zonke iifayile ezithatha indawo engenamsebenzi kwinkqubo yakho.
Ngaphakathi kokususwa kweCCleaner, qala ngokuskena nokucima iifayile ezingenamsebenzi ezikhulula isithuba, ucoce umgqomo wakho wokuphinda usebenzise, ​​kunye neefayile zethutyana, hamba ngeefolda zezikhangeli, cima yonke into ebigcinwe kwindawo yokugcina izinto, cima iifayile zethutyana zezinye iinkqubo kunye nokunye.
Ngelixa Ubuntu unokucinga ukuba akukho sixhobo sinjalo, kodwa manditsho ukuba ayisiyiyo, ngeli xesha ukuyaNdiza kuthatha ithuba ngokwabelana nawe ezinye ze ezinye iindlela ezilungileyo kwiCCleaner Ubuntu bethu.
Ngokungafaniyo neWindows, iLinux icoca zonke iifayile zethutyana (ezi zigcinwa kwi / tmp) ngokuzenzekelayo.
1.1 Uyifaka njani iBleachBit ku-Ubuntu?
2.1 Uyifaka njani iStacer kwi-Ubuntu?
3.1 Uyifaka njani iSweeper ku-Ubuntu?
Ngokuqinisekileyo kunjalo Enye yezona zicelo zithandwayo kwiLinux Kwaye manditsho ukuba ayikhawulelwanga kuphela kwiLinux, kodwa ikwanayo nenguqulelo yayo eza kusetyenziswa kwiWindows.
BleachBit inoluhlu olude lweeapps ezixhasa ukucoca kwaye ke le nkqubo isinika ithuba lokucoca i-cache, ii-cookies kunye neefayile ze-log. Phakathi kweempawu zayo eziphambili esizifumanayo:
I-GUI elula, jonga iibhokisi ozifunayo, ukujonga kuqala kwaye uzisuse.
Multiplatform: I-Linux kunye neWindows
Umthombo wasimahla kunye novulekileyo
Ukwahlula iifayile ukufihla imixholo yazo kunye nokuthintela ukubuyisa idatha
Bhala ngaphezulu indawo yediski yasimahla yokufihla iifayile ezisusiweyo ngaphambili
Umda wokudibanisa umgca wokuyalela uyafumaneka
Uyifaka njani iBleachBit ku-Ubuntu?
Kwezinye iinguqulelo ezidlulileyo iBleachBit ibisele ikwinkqubo ngokungagqibekanga, kodwa ukuba awunayo ayifakwanga, ungakhathazeki nokuba kunjalo kungaphakathi koovimba abagcina Ubuntu ukuyifaka kufuneka sivule i-terminal kwaye senze oku kulandelayo:
Ekupheleni kofakelo, kufuneka sivule usetyenziso kwaye sifunde ukhetho ngalunye olwenzayo xa ujonga ibhokisi nganye yoku.
Isikrini esiphambili seStacer
IStacer sisicelo eyakhelwe kwi-Electron, ngonxibelelwano olucocekileyo nolwanamhlanje lomsebenzisi, Oku kuyakusibonisa ujongano lomzobo kunye nolwazi malunga nokusetyenziswa kweCPU, imemori ye-RAM, ukusetyenziswa kwediski enzima, njl.
Con Umsebenzi wayo wokuCoca inkqubo, usivumela ukuba sisuse i-cache, thululela inkunkuma yethu, ukuvelisa iingxelo zeengxaki, ii-logs zenkqubo, phakathi kwezinye ezininzi. Inemisebenzi eliqela efana naleyo ibonelelwa yiCCleaner
Phakathi kweempawu zikaStacer sifumana:
I-Dashboard ukukunika umbono okhawulezileyo wezixhobo zenkqubo
Isicoci seNkqubo ukukhulula indawo ngonqakrazo olunye
Lawula usetyenziso lokuqalisa ku-Ubuntu ukwandisa ukusebenza
Fumana kwaye ulawule iinkonzo, iidemem
Fumana kwaye ukhiphe isoftware ukukhulula indawo
Uyifaka njani iStacer kwi-Ubuntu?
Esi sicelo sinendawo yokugcina esemthethweni ukuze kufakelo kufuneka sifeze oku kulandelayo kwisiphelo sendlela:
Ukuhlambalaza sisixhobo esinokusifumana ku-KubuntuNangona iyinxalenye ye KDE, ngayo sinokulawula ngokucocekileyo inkqubo yethu.
Inayo i-GUI elula kwaye enobuchule ngayo sinokukhetha iikhrayitheriya ezithile ngendlela emiselweyo kwaye iya kuba kukujongana nokufumana zonke ezo fayile zingenanto kunye nemikhombandlela, amakhonkco aqhekekileyo, amangeniso emenyu angakhombisi nayiphi na inkqubo okanye iifayile eziphindiweyo.
Bakhe iimpawu eziphambili Zizo:
cima umkhondo onxulumene newebhu: ii-cookies, imbali, i-cache
cacisa i-cache encinci
coca iiapps kunye nembali yoxwebhu
Uyifaka njani iSweeper ku-Ubuntu?
Njengoko benditshilo, yinxalenye ye KDE ke siyifumana ku Kubuntu, kodwa ukuba usebenzisa le meko, vula nje itheminali kwaye wenze lo myalelo ulandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Olunye ukhetho olwahlukileyo kwiCCleaner Ubuntu bakho
ULuis Javier sitsho
Ndisebenzisa i-ubucleaner kwaye isebenza kakuhle
Phendula uLuis Javier
Ndicinga ukuba enye ilahlekile: Ubuntu-Ucoceko obukhe wathetha ngalo kunyaka ophelileyo.